Tourism yeBototá inomiririra 29.1% yezvekushanya muColombia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Tourism yeBototá inomiririra 29.1% yezvekushanya muColombia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Bogotá inoverengera chikamu chimwe muzvina chekushanya kweColombia
Bogotá´s yekushanya kweGDP account inosvika 2.5% yehupfumi hweguta, huwandu hweUS $ 1.8bn, yakaratidza mushumo mutsva neWorld Travel & Tourism Council (WTTC), Latin America City Travel & Tourism Impact. Bogotás hupfumi hwekushanya hunomiririra 29.1% yezvekushanya muColombia
Latin America Guta Rekufamba & Tourism Impact ndeimwe yematanho emishumo yeWTTC inotarisa mupiro weTravel & Tourism kuhupfumi hweguta nekugadzirwa kwemabasa. Chidzidzo ichi chinofukidza maguta makumi matanhatu nematanhatu, matanhatu acho ari muLatin America.
Nyika dzese dzinoshandisa maakaunzi e41% emari yeBototá yekushanya, ichiratidza kukosha kwevashanyi vekunze kweguta. Kazhinji nzendo ndedzekuzorora pane kuita bhizinesi. Misika yepamusoro yepasi rose iUnited States (27%), Mexico (10%), Spain (5%), Brazil (5%) neArgentina (4%). Chikumbiro chemumba chichiri kukonzera 59% yemari yekushanya, uye kushandisa mari kubva kune vanosvika kuColombia kunofungidzirwa kuti kuchapetwa ne2026.
Mupiro wese weColombia weKufamba neKushanya chikamu kuGDP ndeye COP51,05bn (US $ 16.7bn), kana 5.8% yeGDP. Mupiro wese weKufamba neKushanya kune basa, kusanganisira mabasa zvisina kunangana akatsigirwa neindasitiri, yaive 6.1% yemabasa ese (mamirioni 1.3 emabasa). Mumakore gumi anotevera chikamu ichi chinotarisirwa kuburitsa mabasa mazana maviri nemakumi mapfumbamwe ane mazana mapfumbamwe.
Nezve WTTC: IWorld Travel & Tourism Council ndiyo masimba epasirese pane hupfumi uye zvemagariro mupiro weKufamba & Tourism. Inokurudzira kukura kwakasimba kwechikamu, kushanda nehurumende nemasangano epasi rose kugadzira mabasa, kufambisa kunze kwenyika uye kugadzira hupfumi. Gore rega rega WTTC, pamwe neOxford Economics, inogadzira mukurumbira weEmpact Impact Report, iyo inotarisa mabhenefiti ezvematongerwo enyika neKufamba neKushanya pasi rose, matunhu nenyika. Gore rino chirevo chinoratidza data pane makumi maviri neshanu mapoka uye nyika zana neshanu neshanu.
Kufamba & Tourism ndiyo yakakosha dhiraivha yekudyara uye kukura kwehupfumi pasirese. Chikamu ichi chinopa US $ 7.6 trillion kana 10.2% yeGDP yepasirese, kana zvese zvakanangana, zvisina kunangana uye zvakakonzerwa zvinozotarisirwa. Chikamu ichi zvakare chinosvika 292 mamirioni emabasa kana rimwe chete mugumi remabasa ese epasi.
Kwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu, WTTC rave izwi reiyi indasitiri pasirese. Nhengo ndivo maChair, maPurezidhendi uye maChief Vatungamiriri vemabhizimusi anotungamira epasirese, epamabhizimusi ekufamba neKushanya, avo vanounza ruzivo rwehunyanzvi kutungamira hurongwa hwehurumende nekutora zvisarudzo, nekusimudzira kuziva kwekukosha kwechikamu ichi.
WTTC wepagore we Global Summit inounza pamwechete vanopfuura mazana mapfumbamwe kuti vakurukure mikana, matambudziko nezvinetso zvakatarisana neindasitiri iyi, nepo Tourism yayo yeMangwana Tembere ichiona simba reindasitiri iyi kuva simba mukusimudzira. Iyi Summit ichaitika muBuenos Aires, Argentina, 900 -18 Kubvumbi 19.